Archive du 20190517
Sosotra amin-dRajoelina Mandrahona hikomy ny Karana…
Nangina ny raharaha fakana an-keriny nandritra ny nitondran’i Andry Rajoelina ny firenena, raha nanjaka nialoha sy nandritra ny fifidianana filoha. Manodidina ny 17 ny fakana an-keriny teratany karana nandritra iny taona 2018 iny, ka lasibatra ry Hiridjee Mustafa tompon’ny Ocean Trade,
KANDIDA HO TALE JENERALIN’NY KANDIDA
Namoaka ny antontan' isa ofisialy ny CSI (Comité de sauvegarde de l'intégrité) mahakasika ireo mikasa ho tale jeneralin' ny Bianco.
BE VAOVAO BASY KALACH ROA AZO TAO BETROKA
Basy "Kalachnikov" miisa roa no saron’ny zandary avy amin'ny kaompania Betroka afak’omaly maraina, tao Andranomiforitra Ankiry.
ANKAZOBE Mpitandro filaminana ny iray amin’ireo mpanendaka
“Mpangarom-paosy enina no tafaraka fa ny roa tafaporitsaka ary ny efatra azon’ny zandary, ny alatsinainy, tsena ho an’ny faritra Ankazobe.
FAHATONGAVAN’NY PAPA RAY MASINA Misoratra anarana eny amin’ny katolika akaiky azy ireo hafa finoana
«Tahaka ireo fihaonambe iraisam-pirenena, tsy maintsy mitondra « badge » avokoa ny mpanotrona rehetra ny Sorona Masina fitsidihan’ny Papa Ray Masina, izay hotanterahina eny Soamandrakizay ny alahady 8 septambra ho avy izao .